बिहान पाठेघरको शल्यक्रिया गरेर बेलुका घर फर्किन सकिन्छ : डा. जगत दीप| Yatra Daily
बिहान पाठेघरको शल्यक्रिया गरेर बेलुका घर फर्किन सकिन्छ : डा. जगत दीप
सुर्यनारायण वि.क. बैशाख १६, २०७८ बिहिबार
वीरगञ्ज, १६ बैशाख । “सन् २०१५ पुर्व नेपालमै पाठेघरको शल्यक्रिया गर्दा पेट चिरेर गर्नुपथ्र्यो । जसले गर्दा शल्यक्रियाको घाउ छिटो निको नहुने, महिनौँ सम्म घाउको स्याहार गर्नुपर्ने, बिरामीलाई लामो समयसम्म आराम गर्नुपर्नेलगायतका समस्या हुने गरेको थियो ।
एउटा समस्याबाट उभान पाउनका लागि गरेको शल्यक्रियाले बिरामीहरुलाई महिनौँसम्म शिथिल पर्न बाध्य बनाउथ्यो । घाउ निको नभएसम्म आरामको विकल्प थिएन । शल्यक्रियाको घाउ निको नहुन्जेल कुनै काम गर्न नमिल्ने । झन् बिरामीको स्याहारको लागि परिवारका सदस्य २४ सैँ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
पाठेघरको शल्यक्रियाको यस्तो परम्परागत पद्धतीलाई विस्थापन गर्नु अत्यावश्यक थियो । त्यतिखेर म भर्खरै दक्षिण कोरीयाबाट ल्याप्रोस्कोपी पद्धतीबाट पाठेघरको शल्यक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर आएको थिए । यस पद्धतीबाट शल्यक्रिया गर्दा पेटमा लामो चिरा पार्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बिरामीको पेटमा एउटा सानो प्वाल पारेर शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ । सन् २०१५ मा बीरगन्जकै नेशनल मेडिकल कलेजबाट मेरो सक्रियतामा ल्याप्रोस्कोपी पद्धतीबाट पाठेघरको शल्यक्रिया सुरु भयो । तर, पछि केही प्राविधीक समस्याका कारण मेडिकल कलेजमा शल्यक्रिया गर्न सकिएन ।”
माथि उल्लेखित भनाई स्त्री प्रजनन् तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. जगत दीपका हुन् । पाठेघरको परम्परागत विद्धीबाट गर्ने शल्यक्रियाको विस्थापन गर्दै नेपाली समुदायलाई ल्याप्रोस्कोपी पद्धतीबाट शल्यक्रियाका लागि विश्वस्त बनाउने प्रमुख पात्रहरु मध्ये एक हुन् डा. जगत दीप ।
पर्साको हरिहरपुर विर्ता जन्मिएका डा. दीपले देश तथा विदेशमा थुप्रै आकर्षक अवसर आएपनि आफ्नै जन्मथलोमा सेवा गर्ने अभिप्रायले अहिले वीरगञ्जको विर्तामा वीरगञ्ज ओम हस्पिटल सञ्चालन गरेका छन् । ‘सम्पुर्ण महिला सम्बन्धी रोगको एकै छानामुनी उपचार’ भन्ने नाराका साथ स्थापित अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतिहरुको सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार, सुई पद्धतीद्वारा सन्तान प्राप्ति, २४ घण्टा भिडियो एक्सरे, महिलाहरुको पाठेघरको अप्रेशन ल्याप्रोस्कोपी (दुबिन पद्धति) द्वारा, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त सुरक्षित गर्भपतन सेवा, २४ सै घण्टा सुरक्षित प्रसुती सेवा, महिलाहरुको कस्मेटिक सर्जरी, एड्भान्स ल्याप्रोस्कोपी र हिस्ट्रो स्कोपी लगायतका सेवाहरु उपलब्ध छन् ।
पेटमा सानो प्वाल पारेर शल्यक्रिया गरिने हुँदा घाउ पाक्ने, दुख्ने तथा बिरामीले महिनौंसम्म आराम गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुने डा दीपको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई–तीन दिनमा अस्पताल बसाइ सकेर बिरामी एक सातामा आफ्नो नियमित काममा फर्किन सक्छ । यस विधिबाट अपरेसन गरेपछि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था समेत तुलनात्मक रुपमा निकै राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । परम्परागत रूपमा पेटमा ठाडो वा तेर्सो लामो चिरा काटेर गरिने अपरेसनको साटो पेटमा स–साना घाउ बनाई पेटको भित्री अंगमा भएको समस्या हेर्ने तथा उपचार गर्ने प्रविधि नै ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हो । यो सर्जरी गर्दा पेटमा एक सेन्टिमिटरसम्मको प्वाल पारेर त्यहाँबाट क्यामेरा पठाएर उच्च प्रकाश र क्यामेराको सहायताले पेटको अपरेसन गरिन्छ ।
स्त्री रोगसँग सम्बन्धित धेरैजसो शल्यक्रिया दुरबिन पद्धतिबाट गर्न सकिन्छ । खासगरि पाठेघर वा पाठेघरको ट्युमर निकाल्न, डिम्ब नलीमा बच्चा बसे उपचार गर्न, पाठेघरको, डिम्बासयको सिष्ट (मासु) निकाल्न ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सफल विधि हो । अल्ट्रासाउन्डलगायत अन्य परीक्षणबाट पहिचान गर्न नसकिएका रोग पहिचान गर्न यो विधि निकै उपयोगी मानिन्छ ।
रोग पहिचान र उपचारमा जस्तै– बाँझोपन वा सन्तान नहुने समस्या पहिचान गर्न समेत यसको प्रयोग सफल भएको छ । यसबाट बाँझोपनको कारण थाहा पाउन सहज भएको छ । नेपालमा २ देखि ३ वटा सम्म पाइपको प्रयोगबाट शल्यक्रिया गर्ने भएपनि १ वटा मात्रै पाइपको प्रयोगबाट वीरगञ्जमा मात्रै पाठेघरको शल्यक्रिया हुने डा. दीपको दावी छ । वीरगञ्जमा मात्रै १ वटा पाइपको प्रयोगबाट शल्यक्रिया गरिने सेवा उपलब्ध हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी भएको उनले बताए ।
अहिले पनि धेरै महिलाहरुलाई यस विधिको बारेमा ज्ञान नहुँदा पुरानै विधिबाट शल्यक्रिया गर्न विवश छन् । फलस्वरुप यो सरल, सहज र विश्वसनिय विधिको बारेमा सबैलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।
स्त्री, प्रसुती तथा बाँझेपन रोग विशेषज्ञ डा. जगत दीपसँग गरिएको संवादमा आधारित